​मधेश विश्लेषक डा. अहिराजको तर्क : प्रदेश २ को नाम ‘हिमालय प्रदेश’ राखे के हुन्छ ?
Thursday, 21 Dec, 2017 3:25 PM
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बहस फेरि एकपटक चर्किएको छ । बढी विवाद प्रदेश १, २, ५ र ७ मा देखिएको छ । जनतादेखि नेतासम्म प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा विभाजित देखिएका छन् । यसले केही समय नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पार्ने सम्भावना देखिएको छ । मधेश आन्दोलनको केन्द्रभाग रहेको प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश नै होला भन्ने धेरैको आँकलन थियो, तर अहिले प्रश्न उठेको छ । केहीले मिथिला प्रदेश बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । नाम मिथिला कि मधेश, स्थान जनकपुर कि वीरगञ्ज भन्ने बहसले प्रदेश २ तात्तिएको छ । यो बहसलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक व्यक्ति हुन्, मधेश मामलाका जानकार डा. राजेश अहिराज । अहिराजलाई न्यूजसेवाको पहिलो प्रश्न, प्रदेश २ को नामकारण के र राजधानी कहाँ राख्दा उपयुक्त होला ? उनले भने :
मेरो बिचारमा चर्चामा आएका यी दुईभन्दा पृथक नाम राख्नुपर्छ । किनभने, मधेशमा करिब ३८ प्रतिशतभन्दा बढी गैरमधेशी मूलका हुनुहुन्छ । पहिचानको लँडाई लड्नेहरुले अर्काको पहिचानलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन । नेपालमा समावेशिता भएन भनेर मधेश केन्द्रीत साथीहरुले आन्दोलन गर्नुभयो, त्यत्रो क्षति भयो, राज्य र समुदाय दुवैको । त्यतिधेरै मान्छे मरेर, महिनौसम्म आन्दोलन गरेर ल्याएको संघीयता हो । प्रदेशको नाम मधेश र मिथिला राख्ने भन्ने बहसमा गम्भिर हुन जरुरी छ । किनभने, मधेश भनेको मधेशीहरुको मात्र होइन, त्यसको नाम साझा हुनुपर्छ । साझा नाम भूमि, भावना वा भविष्य तिनवटामध्ये कुनै किसिमबाट खोज्न सकिन्छ । समुदाय, जात, वर्गको आधारमा नाम लिँदा कतै न कतै एक खालको पिडा दिँदो रहेछ । त्यसैले यसो गर्नु भएको एक खालको विभेदलाई सँगसँगै जन्माउनु हो । मधेशलाई विदेह प्रदेश (हालको प्रदेश २ मा भएको भूभागलाई राजा जनकको पालामा विदेह भनिन्थ्यो) भन्दिए भो । अथवा सिम्रौनगढ पनि राख्न सकिन्छ, यहाँका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ऐतिहासिक कालखण्ड बोकेको ठाउँ हो । त्यहाँ सेन साम्राज्य थियो । यो पहिलादेखि नै राजभूमि हो । तर, कुनै जात, धर्म, सम्प्रदायको नाममा राख्दा एक खालको द्वन्द्व जन्माउँछ । अर्को, अतिवादलाई जन्माउँछ । यी दुईवटैले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्छ ।
मिथिला राखे के हुन्छ ?
मिथिला भनेको कुनै जमानामा एउटा प्रदेश थियो । जनकपुरका गैरमैथिलीहरु, जो मैथिली होइनन्, उनीहरुका लागि यो नाम आफ्नोजस्तो नलाग्न सक्छ । जस्तै : हिन्दूस्तानमा त हिन्दूहरुमात्रै बस्दैनन्, तर मुस्लिमहरुलाई हिन्दूस्तान भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै रिस उठ्दो रहेछ । उनीहरुलाई भारत भनेको नै ठीक लाग्छ । हिन्दुस्तान भन्नेबित्तिकै हिन्दूहरुको मात्रै ठाउँ हो र ? भन्ने कुरा आउँछ । २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका पहाडी, थारु, मारवाडी समुदायका मान्छेहरु र त्यो ८ जिल्लाभन्दा बाहिर भारततिर रहेका मिथिला क्षेत्रका मानिसहरुलाई यो कुराले सँधै पीडा दिइरहन्छ । पीडा हुने नाम राख्नुभन्दा अलि फरक नाम राखौं न, जसले सबैलाई अपनत्वबोध होस् । साझापना बोध होस् । जस्तै : चुरे छ, चुरेको नाममा राख्दिए भयो । सिम्रौनगढको नाममा राख्दिए भयो । त्यस्तो खालको फरक नाम जसमा कसैलाई मेरो मात्र हो भन्ने दाबी नहोस् ।
मधेश राख्यो भने ?
८ जिल्लाभन्दा बाहिरका तराई मूलका मान्छेलाई मधेशी भन्न पाइएन । मधेशभित्र बस्ने नै मधेशी हुन्छ । भोलि पश्चिमतिरका मान्छेलाई मधेशी भनियो भने उसले आफूलाई गिज्याएको अनुभव गर्छ । मधेश तेरो जिल्ला हो, मलाई किन मधेशी भनिस् भनेर । कि त २१ वटै जिल्ला ठ्क्याकै आएको भए मधेश भन्न उपयुक्त हुन्थ्यो । ८ वटा जिल्लामात्रै भएकोले त्यससलाई मधेश नाम राख्दा उचित देखिँदैन । मधेशी मूलका मात्रै बसेको भए मधेश भन्न ठिक हुन्थ्यो । समग्रमा ३८ प्रतिशत गैरमधेशी मूलका मानिसहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरुको भावनलाई पनि कदर गरेर समेट्ने गरी नाम राख्न पाए सही हुन्छ । सकभर द्वन्द्व निम्त्याउने, कोही मानिसले अतिवाद गर्न सक्ने, मेरा मात्र थलो हो भन्ने खालको नामलाई बढावा दिनु हुँदैन । काठमाडौंलाई काठमाडौं नाम झिकेर नेवार प्रदेश राखिदियो भने नेवार समुदायभन्दा बाहिरको मान्छेलाई फरकपन त दिन्छ नि । तर, काठमाडौं नामले सबैको भावना समेटेको छ । त्यसकारण नामांकन, सिमांकन गर्दा रणनीतिक रुपमा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भूमि, भावना र भविष्य । अर्थात् नामका कारण त्यो भूमि द्वन्द्वमा जानु भएन । नामका कारण त्यो ठाउँमा बस्ने जुनसुकै समुदायका व्यक्तिले पनि उसको भावनामा चोट पुगेको महसुस गर्नु भएन । कुनै द्वन्द्व निर्माण भएर त्यस क्षेत्रमा बसेका बासिन्दाको भविष्यलाई संकटमा ल्याउनु भएन ।
के नाम राख्ने त ?
नेपालका अन्य प्रदेश हेरिकन प्रदेश २ ‘टार्गेटेड’ प्रदेश हो । हवाई मित्रहरुको लागि र छिमेकी मित्रहरुको लागि पनि । टार्गेटेड प्रदेशमा एउटामात्र पनि प्वाल भित्रियो भने त्यहाँ उनीहरुले बिषको विजारोपण गर्न सक्छन् । मैलै भन्दा मान्छेहरु रिसाउलान्, नभए त हिमालय प्रदेश राख्दा पनि हुन्थ्यो नि ! जसले विश्वमा नेपाललाई चिनाएको छ । सगरमाथा प्रदेश भनेर राखिदिए हुन्थ्यो । नामले त खासै ठूलो फरक पर्दैन नि । अलिक ठूलो छाती बनाएर राखौं न । तर, संकीर्णता देखिने गरी नाम राखियो भने त्यसले द्वन्द्वलाई संस्थागत गर्छ । हिंसा ल्याउन सक्छ ।
परिस्थिति बुझ्दा त धेरै समस्या देखिए नि ?
मधेशमा रहेका पहाडी समुदायका साथीहरुलाई समेत जोडेर ५० प्रतिशतको दाबी मधेशका नेताहरुले गर्छन् । बर्दिबास, सिमरा, जीतपुर, वीरगंमा थुप्रै पहाडी मूलका साथीहरु हुनुहुन्छ । सबैलाई जोडेर ५० प्रतिशत भन्दै आन्दोलन गरेर अधिकार माग्ने अनि प्रदेशसभा गठन भएपछि ती समुदायलाई जनधनत्वको आधारमा ठाउँ दिने कि नदिने ? जस्तै ः ३८ प्रतिशत जनसंख्या गैरमधेशी हो भने प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको समानुपातिक सिटमा ३८ प्रतिशत ठाउँ त दिनुप-यो । मन्त्रीपरिषद्मा, नियुक्तिहरुमा दिनुप¥यो, सबै ठाउँमा दिनुप¥यो । यो पक्षमा पनि मधेश केन्द्रीत दलहरुले ध्यान दिइरहेका छैनन् । हाम्रो हो, मेरो हो हामीले नै चलाउनु पर्छ, हाम्रै नाम राख्नुपर्छ भन्ने खालको सोंचाई देखिन्छ । यो भनेको एउटा विभेदको अन्त्य र अर्को विभेदको सुरुवात हो ।
केही विद्वान मित्रहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । प्रदेशसभा गठन गर्दा क्लस्टर मिलाउनु पर्दैन भनेर । निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशसभामा क्लस्टर चाहिँदैन भन्दियो । क्लस्टर नहुनु भनेको त्यो क्षेत्रमा रहेको दलित, जनजाति, महिला वा पछाडि पारिएको क्षेत्रले अनिवार्य उपस्थिती त पाएन नि । समावेशीताका लागि लड्नेहरुले आफूभित्रको आन्तरिक समावेशीतालाई ध्यान नदिनु भनेको त एक खालको तानाशाही व्यवस्था हो । केन्द्रमा क्लस्टर चाहिने प्रदेशमा क्लस्टर नचाहिने भनेको ५ कक्षा नपढिकन १० क्लास पढ्न पाउनु पर्छ, भनेजस्तै हो । क्लस्टरको व्यवस्था नहुनु भनेको समावेशीताविरुद्ध ठाडो प्रहार हो । नेताजीहरुले अहिले यो कुरालाई ध्यान दिइरहनु भएको छैन । पछि यो कुरा तब गाह्रो हुन्छ, जब समानुपातिकको सूची ‘फेजआउट’ हुन्छ । त्यसपछि विवाद उठ्छ । दातृनिकाय जसले नेपालमा विवाद चाहिरहन्छ, उसको लागि हामीले ‘प्लटिङ’ गर्दिएको मात्र भयो । प्रदेशसभामा क्लस्टर नहुनु भनेको पनि द्वन्द्वको बिजारोपण हो ।
प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद ?
अर्को बिचार के पनि आइरहेको छ भने आर्थिक राजधानी वीरजंग, साँस्कृतीक राजधानी जनकपुर र प्रशासनिक राजधानी सप्तरी बनाउने भनेर । राज्यसँग काम गराउँदाखेरि सबै काम एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित हुँदो रहेछ । अदालतमा मुद्वा हाल्यो, अदालतले पुलिसलाई मान्छे समात भन्छ, अनि प्रशासनतिर लाग्नुप-यो । समातिसकेपछि त्यसलाई घाउखत छ भने उपचारतिर लाग्नुप¥यो । एकअर्कासँग अन्तरनिहित भएकोले धेरै निकाय धेरै जिल्लामा हालिदिँदा मान्छेलाई सँधैको लागि प्रशासनिक झन्झट हुन्छ ।
अर्को, मान्छेमा दम्भ पलाउँछ । मेरो इलाकामा न्यायलय छ भन्ने उसले एक खालको दम्भ देखाउने, अर्कोले मेरो क्षेत्रमा कार्यपालिका छ भन्ने दम्भ देखाउने । यी दुबै राम्रो होइन । बरु सेवा केन्द्र राख्न पाइयो । वीरगंज आफैँमा आर्थिक, व्यापारिक भूमि हो । जनकपुर सांस्कृतिक भूमि हो, इतिहास बोकेको छ । राजधानी राख्ने भनेको जनताको सेवा सुविधा र सर्तहरुमा सहजता ल्याउन हो । काठमाडौंले गर्दा गाह्रो भयो भनेर जुम्ला, रौतहटका मान्छेहरुले भन्छन्, त्यो टाढा भएर न हो । टाढाबाट नजिक ल्याउन खोज्ने, तर नजिकको नाममा कुनै अमुक जिल्लालाई मात्रै सहज गर्नु त भएन नि । ८ वटा जिल्लामध्ये रौटहट वा महोत्तरी उपयुक्त हुन सक्ला । महोत्तरीमा के सहजता छ भने त्यहाँ विघौविघा जग्गा गौशालाको नाममा छ । गुठीका नाममा छ । त्यो धेरै जग्गा मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुले नै कब्जा गरेका छन् । सय डेढसय विघा जग्गाहरु एकै ठाउँमा छ । सर्लाही पनि राम्रो छ । जे होस्, मध्य भागमा राखिनु पर्छ, सबैलाई सहज हुन्छ । जाउआउन गर्न सहज हुन्छ । वीरगंज राखियो भने राजविराजको मान्छे आएर काम गरेर फर्कन सक्दैन । बीचमा राखियो भने दुवैतर्पmका लागि पायक पर्छ । जनतालाई सहजताका लागि नै संघीयता ल्याएको हो ।